President Brazilian Bolsonaro kuda kurambidza nevanhukadzi dzidziso muzvikoro | Apg29
vana School vanofanira kuchengetedzwa kubva chechikadzi dzematongerwe, anonyora President wenyika Brazil Jairi Bolsonaro musi Twitter.
Image: World nhasi.
Hazvina kuoma kunzwisisa nei purezidhendi Brazilian Jairi Bolsonaro, kufanana US President Donald Trump, mukurumbira chaizvo pakati pevaKristu.
vana School vanofanira kuchengetedzwa kubva chechikadzi dzematongerwe, Mutungamiri Brazil, Jairi Bolsonaro, akati kutarisa Twitter. Kutarisirwa ake achava pasi rugwaro panyaya.
"Kuti adzivirire vana kuchikoro, ndakamukumbira reBazi Redzidzo agadzire bhiri kuti kurambizwe nevanhukadzi dzematongerwe kuchikoro chepuraimari," akanyora musi 3 September.
The kutama maererano nomufananidzo Bolsonaro akanga paakava purezidhendi Brazil ..
"Tine yakasiyana mukana mberi kwedu kuvakazve nyika yedu ... Tiri vanhu mumwe, asi mhuri, kuremekedza zvitendero uye muJudha-Christian yedu hwaro, chinorwisa munhui dzematongerwe, kuchengetedza tsika dzedu," Iye akati, maererano The Guardian.
Hazvina kuoma kunzwisisa nei purezidhendi Brazilian Jairi Bolsonaro, kufanana US President Donald Trump, chaizvo yakakurumbira pakati pevaKristu. Uye kufanana kwayo American ishamwari haasi nevakawanda zvikuru pakati LGBT madenderedzwa uye akasiya-liberals.
chikoro World yepamwoyo
School Sunday ndiro chikoro zvakanaka vana! Regai vaende kuna Sunday chikoro kuitira kuti vawane vabatisise Jesu - kana asi kuti Jesu Vawane - ipapo vachava vakachengeteka uye rinopindirana kuburikidza upenyu.